Chirongwa chemutauro weruwa, ruzivo rwemaruwa rurimi, zviduku zvinyorwa zvishandiso.
URL dzemawebsite dziri muChirungu. Saka, vanhu vasiri English, vagari vomumaruwa uye vemo vanogona kuzarura mawebhusayithi. Mutauro wedu shanduro inonyanyogadzirwa kwavari.
1. Vashandisi vemitauro yegungwa vachawana webpage nekubatsirwa chero ani kamwe chete 2. Mushure mezvo vanogona kuzarura mawebhusayithi nechombo chedu, nemaoko avo pachavo.